Synthetic Division | Target Mathematics
Polynomial ကိန်းတန်းတစ်ခုကို polynomial of first degree နဲ့ စားတဲ့အခါ ရလာတဲ့ remainder အကြောင်းကို remainder theorem မှာ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ Remainder Theorem အရ သိနိုင်တာက အကြွင်း (remainder) ပါပဲ။ စားလဒ် (quotient) ကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ ဥပမာ လေးကြည့်ရအောင်။
p(x) = x3–7x–6 ကို x-4 နဲ့ စားမယ်ဆိုရင် remainder= p(4) ပေါ့။
p(4)= 43–7(4)–6 = 30 လို့သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ p(x)=x3–7x–6 ကို dividend (တည်ကိန်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ x –4ကို စားကိန်း (divisor) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ p(4)=30 ကိုတော့ အကြွင်း (remainder) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ remainder theorem အရ အလွယ်တကူ တွက်ထုတ်နိုင်တာက remainder value ပါပဲ။ စားလဒ် (quotient) ကို လိုချငိတယ်ဆိုရင်တော့ ချစားရတော့မှာပေါ့။ ဒီလိုပါ။
အခုဆိုရင် စားလဒ်က q(x)=x2+4x+9 ဆိုတာကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပြဌာန်းချက်ပါ သင်ရိုးအရ စားလဒ်ကို လိုချင်ရင် ဒီလိုပဲ actual division နဲ့ပဲ စားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် multiple choice လို မေးခွန်းမျိုးအတွက် စားလဒ်အဖြေကိုပဲ လိုတဲ့အခါ ဒီနည်းဟာ ရှည်လျားပြီး အချိန်ကုန်တာပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ စားလဒ်ကော အကြွင်းကိုပါ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်တဲ့ synthetic division ကို သုံးပြီး တွက်ထုတ် နိုင်ပါတယ်။
အထက်က စားပြခဲ့တဲ့ polynomial ကိုပဲ ဥပမာအဖြစ် တွက်ကြည့်ရအောင်။ x3–7x–6 ကို x -4နဲ့ စားပါမယ်။
အဆင့်(၁)။ တည်ကိန်းရဲ့ terms တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ မြှောက်ဖေါ်ကိန်းများ (coefficients) ကို degree အလိုက် အစဉ်လိုက် ချရေးပါမယ်။ လက်ရှိကိန်းတန်းမှာ ဆိုရင် x2 ပါတဲ့ကိန်းလုံး (term in x2) မပါဝင်တဲ့အတွက် coefficient=0 လို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စားကိန်း (in the form of x - k) မှာ ပါဝင်တဲ့ constant term k (ဒီဥပမာမှာ ဆိုရင်တော့ k=4 ပေါ့) ကို လည်း အောက်မှာ ပြထားသလို ရေးချလိုက်ပါ။
အဆင့်(၂)။ ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့ coefficient 1 ကို ပြထားသည့်အတိုင်း ဆွဲချလိုက်ပါ။ ၎င်းနောက် k တန်ဖိုးဖြစ်သော4နှင့်မြှောက်ပြီး ဒုတိယ column က0အောက်တွင် ရလဒ်ကိုရေးပါ။
အဆင့်(၃)။ ဒုတိယ column မှ တန်ဖိုးများကို ပေါင်းပါ။ ရလဒ်ကို4နှင့်မြှောက်ပြီး တတိယ column တွင် ရေးပါ။ ထိုနည်း အတိုင်း column များကို ဖြည့်စွက်သွားပါ။
ရှေ့ဆုံးဂဏန်းသုံးလုံး (149) သည် စားလဒ်၏ coefficient များ ဖြစ်ပြီး 30 မှာ remainder ဖြစ်ပါတယ်။ မူလ polynomial ၏ degree မှာ3ဖြစ်သောကြောင့် စားလဒ်မှာ degree တဆင့်လျှော့ကျသွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် စားလဒ်က x2+4x+9 လို့ အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တဲ့ နည်းကို synthetic division လို့ ခေါ်ပါတယ်။ long polynomial division နဲ့ ချစားရန် မလိုပဲ quotient ကော remainder ပါ အလွယ်တကူ သိနိုင်တဲ့ နည်းတစ်ခုပါပဲ။
Example 1. Use synthetic division to divide 2x5 + 3x4 + 25x² − 1 by x + 3.
Dividend = p(x)= 2x5 + 3x4 + 25x² − 1 .
Divisor = x − k = x +3= x – (-3)
Therefore k = -3
Therefore the quotient is 2x4 − 3x3 + 9x² − 2x +6and the remainder is -19.
ဒီလောက်ဆိုရင် synthetic division ကို သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။